Inkcitho yokuThengisa yeNtengiso ye-Q3 2015 Ibonisa iinguqu eziDala | Martech Zone
Inkcitho yokuThengisa yeNtengiso ye-Q3 2015 Ibonisa iinguqu eziDala
NgoLwesihlanu, Oktobha 16, 2015 NgoLwesihlanu, Oktobha 16, 2015 Douglas Karr
IiKenshoo's abathengi benza amaphulo entengiso yedijithali asebenza kumazwe angaphezu kwe-190 kwaye abandakanya phantse isiqingatha se-Fortune 50 kuwo onke amanethiwekhi aphezulu e-10 earhente yentengiso. Idatha eninzi- kwaye ngombulelo iKenshoo yabelana ngedatha nathi rhoqo ngekota ukuze siqwalasele ukutshintsha kwezinto.
Abathengi bathembele kwizixhobo eziphathwayo kunanini na ngaphambili, kwaye abathengisi abaphambili bahamba ngokulandela imikhankaso eyandisiweyo eyanikezela iziphumo ezilungileyo kuzo zombini ezihlawulelwayo zentlalo kunye nophando. UChris Costello, uMlawuli woPhando lweNtengiso eKenshoo.
Ayisiyonto nje ekhulayo yokuhamba okuhamba ngendlela eyahlukileyo kulo nyaka:
Intengiso yeendaba zeNtlalo ukuvela kuye kwehla ngama-36% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo ngelixa ukucofa kwehle nge-75% kunye nenqanaba lokunqakraza kwezentlalo lonyuka nge-174%.
Intengiso yokukhangela ehlawulelweyo ukubonakala kwonyuswe nge-3% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo ngelixa ukucofa kunyuke nge-16% kunye nenqanaba lokucofa lenyuka nge-12%.
Intengiso eselfowuni ukuvela kwonyuse i-73% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo ngelixa ukucofa kunyuke nge-108%. Ngapha koko, intengiso iyonke eshukumayo inyuse i-69% ebabazekayo ngelixa inkcitho yedesktop kunye nethebhulethi ihleli ithe tyaba.
Olunye uhlobo olunomdla, ngokoluvo lwam, kukuhla kweendleko ngonqakrazo olunye kunye nokwanda kwenqanaba lokucofa.
IKenshoo ikwapapashe imikhwa yokudityaniswa Imimandla yeAsia Pacific Japan kunye neYurophu, Middle East kunye nemimandla yeAfrika.
tags: 2015americaskenshooInkcitho kwintengiso ephathekayoinkcitho yentengiso ehlawulelweyoinkcitho yokukhangela ehlawulelweyoI-q3 2015Inkcitho yekotaukukhangela iindlela zentengisoInkcitho yokukhangela kwiinjini yokukhangelaInkcitho kwintengiso zentlaloInkcitho kwintengiso yoluntuInkcitho kwintengiso yemidiya yoluntuInkcitho kwintengiso yemidiya yoluntu
Uyenza njani eyona ngxelo intsha yokuGuqulwa kweAdWords